Ikhonondise ungqongqoshe wamaphoyisa eyamaphara - Ilanga News
Home Izindaba Ikhonondise ungqongqoshe wamaphoyisa eyamaphara
Ikhonondise ungqongqoshe wamaphoyisa eyamaphara
Kukhalwa ngokugcaluza kwawo ngobuningi ezitaladini zeTheku
Ngakwesobunxele nguLindokuhle Mkhize noThabani Shabalala asebekhe-the ukubuyela emgwaqweni ngenxa yendlala ezinkambini abagcinwe kuzo njengoba kugonqiwe.
ISEYINKINGA indaba yokugcaluza kwamaphara eThekwini ekubeni izwe lisavaliwe ukusebenza ukuzama ukunqanda ukubhebhetheka kweCovid-19.
Lokhu kuvezwe nguNgqongqoshe wamaPhoyisa kuleli uMnu Bheki Cele ngesikhathi ekhuluma namaphoyisa eCentrum Park, eThekwini, izolo ngoLwesithathu.
UMnu Cele ubezobheka ukusebenza kwamaphoyisa kuleli dolobha nokuqinisekisa ukuthi imithetho yokuvalwa kwezwe iyalandelwa. Nakuba ekuncomile ukusebenza kwawo kuleli dolobha kodwa ukhalile ngamaphara ikakhulukazi agcaluza e-Albert Park nahlala esidlekeni sawo esingaphansi kwebhuloho elisemgwaqweni u-M4 obheke eningizimu yeTheku.
Uthe kumele kusukunyelwe lokhu njengoba kungavumelekile ukuthi kube nabantu abasacanasa ngalesi sikhathi izwe livaliwe.
UMnu Cele ekhuluma nala maphoyisa abeqhamuka ngaphansi kwezinhlaka ezahlukene zokuvikela, uqale wancoma ukwehla kobugebengu obahlukene ngalesi sikhathi izwe lisavaliwe ukuqhathaniswa nesikhathi esifanayo ngonyaka odlule.
Uncome ukuvalwa kotshwala njengesizathu esinqala sokwehla kobugebengu kuleli.
Ubale ubugebengu obahlukene encoma ukwehla kwezibalo kodwa waveza ukukhathazeka ngodlame lwasemakhaya athe izibalo zalobu bugebengu ziyethusa.
Uthe nakuba amaphoyisa kumele awenze umsebenzi ukubopha abathintekayo, kodwa kunzima ukuthi angaqapha ubaba wekhaya noma umkhwenyana ngaso sonke isikhathi.
Uthe okuqaphelekayo ngalobu bugebengu wukuthi budalwa ngabantu abazanayo nezisulu.
UMnu Cele ukuncomile ukusebenza kwamaphoyisa ukubhekana nobugebengu obahlukene kodwa wakuveza ukuthi kumele aqhubeke nokwenza umsebenzi wawo ngokulandela imithetho ebekiwe, ehambisana nomthethosisekelo nokuvalwa kwezwe.
Uphinde wagxeka abasezi-nhlakeni zokuvikela abatholakala bephambana nomthetho. Uthe kuyethusa ukuthi sekuboshwe abangaphezulu kuka-180 kanti kubona kunabangaphansi kweSAPS abawu-89.
Uwagxekile amaphoyisa aphambana nomthetho nje-ngoba eveze ukuthi phakathi kwaboshiwe kukhona abethe-ngisa utshwala, amanye egwazisa, nokungayilandeli imithetho yezwe ebekiwe.
UMnu Cele uphinde wadlu-lisa amazwi enduduzo ngamaphoyisa asedlule emhlabeni ngalesi sikhathi njengoba eveze ukuthi kunephoyisa elibulawe ngoLwesibili kusihlwa eSebokeng, eGauteng.
UMnu Cele usuke eCentrum Park walibangisa eningizimu yeTheku ngasesikhumulweni sezindiza esidala lapho efike wabamba khona isivimbamgwaqo.
Kulesi sivimbamgwaqo ubeqinisekisa ukuthi bonke abasemgwaqweni banezimvume ezisemthethweni zokuhamba.
Khonamanjalo, isikhulu esiphezulu samaphoyisa angaphansi kukaMasipala weTheku, uMnu Steve Middleton, sithe bazoyisukumela indaba yamaphara eThekwini, kwazise usizwile isikhalo sikaMnu uCele.
Uphinde waveza nokuthi kuzophenywa ngesigameko se-video eqoshiwe esabalale ezinkundleni zokuxhumana lapho kubonakala amaphara ekotele imoto yamaphoyisa ngemuva. La maphara aphinde abonakale ehla kule moto abaleke ngezinyawo.
Previous articleKuboshwe othumbe usana lwasekhweni
Next articleImingcwabo iyingozi kwiCovid-19